अवैधानिक भ्रुण परिक्षण र भ्रुण हत्या बढ्दो – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun अवैधानिक भ्रुण परिक्षण र भ्रुण हत्या बढ्दो – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
अवैधानिक भ्रुण परिक्षण र भ्रुण हत्या बढ्दो
extra९ आश्विन २०७८, शनिबार २२:५८नेपाली कांग्रेस व्यास नगर अधिवेशन : सभापतिमा हड्खले निर्वाचित
कभर न्युज९ आश्विन २०७८, शनिबार २०:५५कांग्रेस भानु अधिवेशन: सभापतिमा रामकुमार विजयी
extra९ आश्विन २०७८, शनिबार १९:४१नेपाली कांग्रेस म्याग्दे अधिवेशनः सभापतिमा घिमिरे विजयी (मतसहित )
ऋषिङ न्युज९ आश्विन २०७८, शनिबार १९:३४कांग्रेस ऋषिङ अधिवेशनः सहमतिका लागि तरुण दलले दबाब दिए पछि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन
२ चैत्र २०७७, सोमबार १४:१५
दमौली: गर्भमा रहेको बच्चाको लिङ्ग परिक्षण तथा परिक्षणका आधारमा गरिने भूर्ण हत्या आफैमा अवैधानिक छ । यसो गरेको खण्डमा परिक्षण गर्ने वा गराउने दुवै कारवाहीको भागीदार हुन्छन् । तर हिजो आज पेशागत मर्यादा भन्दा माथि उठेर केही स्वास्थ संस्थान र स्वास्थ्कर्मीहरु भने अवैधानिक रुपमा कमाउ धन्दामा लागेको देख्न सकिन्छ । गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने परिपाटी नेपाली समाजमा मौलाएको देख्न सकिन्छ । अवैधानिक तरीकाले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग परिक्षण गरेको शुल्क कति लाग्ला अनुमान गर्नुहोस् । जो कोहीलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । साधारतया गर्भवती महिलाले कम्तीमा ४ पटक सम्म स्वास्थ संस्थामा गई शिशुको अवस्था, वृद्धि विकास बारे थाहा पाउन भिडियो एक्सरे मार्फत परिक्षण गर्नु पर्छ । तर केही निजी स्वास्थ संस्था र स्वास्थ्कर्मीहरू भने पैसा कमाउनकै लागि आफ्नो सीप र क्षमताको दुरुपयोग गर्दै आएका देख्न सकिन्छ । यसरी नै तनहुँको दमौलीमा समेत केही निजी स्वास्थ संस्था र स्वास्थ्य कर्मीले चर्को मूल्यका साथ भ्रूण परिक्षण गर्ने गरेको गुनासोहरु सुन्नमा आएका छन् । आफ्नो परिचय नखुलाउन आग्रह गर्दै एक गर्भवती महिलाले आफूले एक पटकको ८ हजार रुपैयाँ तिरेको बताइन् । साधारतया भिडियो एक्सरे गरे वापत ४ सय देखि ५ सय सम्म लाग्ने भए पनि स्वास्थकर्मीले लिङ्ग पहिचान समेत गरिदिने भन्दै ८ हजार रकम तिरेको उनीले बताइन् । सो निजी स्वास्थ संस्थामा विगत थुप्रै समय देखि गर्भ परिक्षण गरिँदै आएको र दिनहुँ जसो भ्रूण परिक्षका लागि २_४ जनाको नियमित उपस्थिति समेत हुने गरेको उनले बताइन् । श्रोत खुलाउन नचाहेकी उनले फलानो अस्पताल त भ्रुण परिक्षणका लागि नै चिर परिचित रहेछ उनले भनिन् । थुप्रै महिलाहरु भ्रुण परिक्षण कै लागी सो स्थानमा आउने रहेछ उनले भनिन् । परिक्षण गरे लगतै स्वास्थ्कर्मिले प्रति व्यक्ति ८ हजार रकम असुली गरेको तर अवैधानिक भएको भन्दै तिरिएको रकमको रसीद भने नदिने गरेको पाईएको छ । यसरी गरिने लिङ्ग परीक्षण र परिक्षणका आधारमा गरिने भ्रूण हत्या रोक्न प्रशासन र स्वास्थ्य कार्यालयले समयमा नैं कदम चाल्नु जरुरी देखिन्छ । लिङ्ग पहिचान गरेर गरिने गर्भपतन रोक्न बनेको कानून खासै कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या अझ विकराल बनेको छ । कानूनले १२ हप्ता अर्थात् तीन महिनासम्मको मात्रै गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि लिङ्ग पहिचान गरेर चार महिनापछि पनि गर्भपतन गराउनेहरुको संख्या दिनहुँ जसो बढेको छ । कमाउ धन्दामा लागेर पेशागत मर्यादालाई कायम नराख्ने स्वास्थ्कर्मी जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । तसर्थ लैंगिक परीक्षणका आधारमा गरिने भुर्ण हत्या अक्ष्म्य अपराध हो । यसलाई रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायको समयमा नै ध्यान जाओस् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २ चैत्र २०७७, सोमबार १४:१५ 966 Viewed
प्रथम ऋषिङ्ग म्याराथन २०७७ पौष २७ गते हुने
घिरिङमा धारादी खानेपानीको सभासद गुरुङबाट उद्घाटन
वसन्तलाई गीतल प्रतिभा, सुदेशलाई गीतल युवा पुरस्कार
गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयः चैते दशैं र ल्होसारमा बिदा
तनहुँमा एकैसाथ ५८ संक्रमित थपिए
नेताज्यू गफ हैन, काम गर्न अघि बढ्नुस्
भिमादका दुई महिलामा कोरोना संक्रमण
एमाले विवादः तनहुँकी सांसद कलिलासहित नेपाल समूहका १४ सांसदलाई कारवाही
एपेक्स मल्टिप्लेक्स सफासडकसम्म विस्तार, बुकिङ खुलाउँदै
भानु ८ मा लत्रिएको तार व्यवस्थापन भएन, कालको मुखबाट जोगिइन् बालिका, अवस्था गम्भीर